“ကော့သောင်းမြို့ - သူဌေးကျွန်း – Cocks Comb Island ???????????????? /ကြက်မောက်ကျွန်း /အသဲပုံကျွန်း” နှင့် ရနောင်းမြို့( ၃ ညအိပ်/ ၄ ရက်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Travel » “ကော့သောင်းမြို့ - သူဌေးကျွန်း – Cocks Comb Island ???????????????? /ကြက်မောက်ကျွန်း /အသဲပုံကျွန်း” နှင့် ရနောင်းမြို့( ၃ ညအိပ်/ ၄ ရက်)	0
Posted by သျှားသက်မာန် on Jan 25, 2016 in Travel |0comments
“ကော့သောင်းမြို့ - သူဌေးကျွန်း – Cocks Comb Island
/ကြက်မောက်ကျွန်း /အသဲပုံကျွန်း” နှင့် ရနောင်းမြို့( ၃ ညအိပ်/ ၄ ရက်)
တစ်ဦးလျှင် ဒေါ်လာ – မြန်မာနိုင်ငံသား $580 နိုင်ငံခြားသား $ 630
“အသဲပုံကျွန်း/ကြက်မောက်ကျွန်း””The Emerald Heart Island of Myanmar”ဟုခေါ်တင်စားခေါ်ဝေါ်သော
မြန်မာပြည် တောင်ဘက်စွန်းပိုင်း တနင်္သာရီဒေသ၏ အလွန်အံသြမှင်သက်ဖွယ်ရာ ရှားပါးတန်ဖိုးရှိလှသည့် အလှတရားများ
စုဝေးရာ သန္တာကျောက်စွယ် ကျောက်တန်း သဘာဝ အလှများ တည်ရှိရာ သို့သွားရောက်လည်ပတ်မည့် ခရီးစဉ် လေးပါ
***မြန်မာပြည်ရဲ့ တောင်ဘက်စွန်းပိုင်းဖြစ်သော ကော့သောင်းမြို ရှိ အထင်ကရ နေရာများဖြစ်တဲ့
ပင်လယ်နဲ့တစ်ဆက်တည်း အလွန်လှပတဲ့ ရှုခင်းတွေ ခံစားရင်း ဘုရင့် နောင်အငူ ၊ ငါးသုံးလုံးတောင်၊ ပလုပ်တုတ်တုတ်ကမ်းခြေ ၊
ပြည်တော်အေးဘုရား နင့် နေရာ အစုံအလင်တို့ ကို လည်ပတ်ရင်း အပန်းဖြေကြရအောင်။
*** ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ သူဌေးကျွန်းကြယ်ငါးပွင့် Grand Andaman Club ဇိမ်ခံဟော်တယ်ကြီး မှာ တည်းခိုရင်း
သဘာဝရဲ့လက်ဆောင် အသဲပုံမြစိမ်းရောင်ကျွန်းမှာ SNORKELLING, SWIMMING, DIVING လုပ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ရေအောက်သဘာဝအလှကို ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေ ရမှာနော်။ သဲဖြူကျွန်းမှာ နေဆာလှုံရင်း အလှဓာတ်ပုံတွေ အမှတ်တရ အဖြစ်ပြန်ပါလာမှာနော်။ သဘာဝ ငှက်သိုက်ကြိးတွေရှိတဲ့ငှက်သိုက်ကျွန်းက ငှက်သိုက်ဂူတွေကိုလဲ ရောက်အောင်သွားမှာနော်
*** ရနောင်းမြို့ ၏ အလှအပများကို လေ့လာပြီး ဈေးနှုန်းအသက်သာဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးပစ္စည်းများကို ၀ယ်ယူကြမယ် ၊
Snorkeling Trainer တွေလဲပါဝင်လို့ ရေလုံးဝမကူးတတ်သူများလည်း ဘေးကင်းစိတ်ချစွာနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းတဲ့
Snorkeling အတွေ့အကြုံတွေ စွာ ရယူခံစားနိုင်ပါတယ်။
ရန်ကုန် – ကော့သောင်း – ရန်ကုန် အသွားအပြန် လေယာဉ်လက်မှတ်များ၊
ကော့သောင်း – သူဌေးကျွန်း -ရနောင်း – ကော့သောင်း Boat များ၊ ကော့သောင်း CITY TOURS ကားများ၊
5 stars အဆင့်ရှိ အဆင့်မြင့် ဟိုတယ်တွင်(၂)ည တည်းခိုခြင်း၊ ကော့သောင်း GARDEN HOTEL တွင် (၁)ည တည်းခိုခြင်း။
Snorkeling Guide fees
နိုင်ငံခြားခရီး တွေထက်ပို ပြီး exciting ဖြစ်ရမယ့် အပန်းဖြေခရီး၊ ဈေးနုန်းလည်း သက်သာပြီး အပိုထက်ကုန်စရာ မလိုတဲ့ အပြင်
အစားအသောက်ကလဲ special ၊ phone လေး တချက်ခေါ်ရုံနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့ all in one service
ဖြစ်တာကြောင့် နောက်မကျခင် အခုဘဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်။
အမှတ် (၁၈၀)၊ မြေညီထပ်၊ ရန်ကင်းဈေးကွေ့ အနီး၊ ဦးချစ်မောင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊
phone no. ????01 544 277 , 09 7878 111 22, 09 78 2220 681~5